KULMIYE Party » Dhallinyaro ka tirsan xisbiga KULMIYE oo iskood isku abaabulay, kana soo jeeda Gobolka Saaxil, ayaa tartanno kubadda cagta ah ka bilaabay deegaannada Gobolkaasi. Dhallinyaro ka tirsan xisbiga KULMIYE oo iskood isku abaabulay, kana soo jeeda Gobolka Saaxil, ayaa tartanno kubadda cagta ah ka bilaabay deegaannada Gobolkaasi. – KULMIYE Party
Dhallinyaro ka tirsan xisbiga KULMIYE oo iskood isku abaabulay, kana soo jeeda Gobolka Saaxil, ayaa tartanno kubadda cagta ah ka bilaabay deegaannada Gobolkaasi.
HomeDhallinyaro ka tirsan xisbiga KULMIYE oo iskood isku abaabulay, kana soo jeeda Gobolka Saaxil, ayaa tartanno kubadda cagta ah ka bilaabay deegaannada Gobolkaasi.
Dhallinyaradani waxay tartanka ka bilaabeen degmada Abdaal oo ay ka fureen tartan kubadda cagta ah oo ay ku loollami doonaan kooxo ka kooban da’yarta ku dhaqan degmadaasi, isla markaana waxay ku wareejiyeen diraysyo iyo agab kuwa ciyaaraha ah.
Dhallinyarada hawlgalkan fulinaya ayaa kala ah; Maxamuud Axmed Xirsi, Cali Jaamac (Cali Qaran), Jimcaale Cawke, Ismaaciil Khayre, Abshir Xuseen, Axmed Cambe, Cabdiraxmaan Cali Maxamed, Mukhtaar Cismaan iyo Cabdiqaadir Cige.
HALKAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA WARKA TARTANKAAS